लुम्बिनी पर्यटन महोत्सवः ‘स्थायी मण्डपको व्यवस्था हुनुपर्छ’
लुम्बिनी पर्यटन महोत्सवः ‘स्थायी मण्डपको व्यवस्था हुनुपर्छ’ नारायण प्रसाद भण्डारी, उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष
जनतापाटी मंगलवार, मंसिर ३, २०७६, ०९:२३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारी भैरहवा क्षेत्रका युवा उद्यमी हुन् । युवावस्थामै सामुहिक र संस्थागत रुपमा उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा हात हालेका भण्डारी सफल व्यवसायीको रुपमा परिचित छन् ।
व्यवसायका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा समेत आबद्ध भण्डारी भैरहवामा आजदेखि हुन लागेको पाँचौ लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धन, औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सव २०७६ का मूल आयोजक समितिका संयोजक समेत हुन् ।
यसपटक महोत्सवलाई यस अघिका महोत्सव भन्दा फरक ढंगबाट आयोजना गरी धेरै स्टल बुकिङ्ग र अत्याधिक दर्शक ल्याउने अभियानमा रहेका भण्डारीसंग महोत्सवको सेरोफेरोमा रहेर जनतापाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार संक्षेपः
उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देही र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स काठमाण्डौंको आयोजनामा हुने पाँचौ लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धन औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सव–२०७६ को पूर्ण तयारी अवस्थामा हामीहरु छौँ । स्टल निर्माण लगायत सबै काम पूर्ण रुपमा सकिएको छ । अब महोत्सवको औपचारिक उद्घाटनको पर्खाइमा छौँ ।
महोत्सवको उद्घाटन कहिले र कसले गर्दैछ ?
महोत्सवको उद्घाटन २०७६ मंसिर ३ गते बिहान ११ बजे सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भव्य समारोहका बीच गर्नुु हुने कार्यक्रम रहेको छ । उद्घाटन समारोहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम भुसाल लगायत विशिष्ट पाहुनाहरुको सहभागिता रहनेछ ।
महोत्सवभित्र कस्ता स्टल छन् ?
महोत्सवभित्र उद्योग, व्यापार, कृषि र पयर्टन तथा होटलहरु गरी ४ सयवटा स्टल रहने छन् । जसमा स्थानीय उत्पादनका स्टलहरु, स्थानीय कृषि फर्मद्धारा उत्पादित स्टलहरु, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि जोडेर मायादेवी मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत पर्यटकीय डुम मार्फत ५ नम्बर प्रदेशका पर्यटकीय स्थानहरुको आकृतिसहित स्टलहरु लगायत रहनेछन् ।
महोत्सव स्टलमा प्रवेशको लागि के व्यवस्था छ ?
महोत्सव अवलोकन गर्नको लागि हामीले अहिलेसम्म नेपालमै नभएको सुविधा प्रदान गर्दैछौं । बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म शनिबार र सार्वजनिक विदाबाहेक अन्य दिनमा सम्पुर्ण दर्शकलाई प्रवेश निःशुल्क व्यवस्था गरेका छाैँ । त्यसै गरी ७० वर्ष भन्दा माथिका सम्पुर्ण बुवा–आमाहरुलाई प्रवेशमा निःशुल्क गरेका छाैँ । साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौँ । टिकटको हकमा रु. ७०, विद्यार्थी रु.४० र ग्रुप विद्यार्थी ३० मात्रै व्यवस्था गरेका छौं । यो व्यवस्थाले आम समुदायलाई मेला अवलोकनमा खासै समस्या छैन ।
महोत्सवमा दर्शकको संख्या तथा कारोबार कति होला ?
महोत्सवमा बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रवेश निःशुल्क भएको हुँदा यसपटक तीन लाख भन्दा बढी दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने र २५ देखि ३० करोडको कारोबार हुने उद्देश्य राखेका छौँ । खास गरी दक्षिणी भेगका दर्शकहरुलाई मेलाले आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यहाँलाई महोत्सवबाट के-कस्ता फाइदा होला जस्तो लाग्छ ?
यस्ता खाले महोत्सवले स्थानीय उद्योगको प्रर्दशनी र सिधैं उपभोक्तासंग जोड्ने पुलको काम गर्छ र उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दछ । कृषि उत्पादनका उपजहरुको प्रर्दशनीले कृषिमा प्रवद्र्धन गर्नुको साथै बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिमा जोड्न मद्दत गर्दछ भने पर्यटकीय स्थानहरुको प्रचारप्रसार गरी पर्यटकीय स्थानको प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
महोत्सवभित्र अन्य के-के गतिविधि छन् ?
महोत्सवभित्र उद्योग, व्यापार, कृषि र पर्यटन जोड्नुको सार्थ स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरुको दैनिक प्रस्तुती, डि.जे. कार्यक्रमको साथै खेलकुदतर्फ कुस्ती प्रतियोगिता, व्याड्मिन्टन प्रतियोगिता, तेक्वान्दोको प्रर्दशनी लगायत खेललाई स्थान दिएको छौँ भने आकर्षक वाल उद्यान, सेल्फीजोन, मत्स्य उद्यान आदि कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।
महोत्सव भारतको सीमा नजिकै पनि छ । त्यस कारण भारतमा सामान खरिद गर्न जाने ग्राहकहरुलाई रोक्न के योजना छ ?
वास्तवमा महोत्सवभित्र हामीहरु गुणस्तरीय सामानहरु कम्पनीको मूल्यमा छुटसहित विक्री वितरण गर्छौैं । त्यस विषयमा सबै स्टलधनीहरुसंग अनुरोध गरी सकेका छौँ की तपाईहरु कति छुट दिन सक्नुहुन्छ ? यही महोत्सवको समयमा दिनुहोस् । यसले गर्दा भारतको बजारमा जाने उपभोक्तालाई रोक्न सकियोस । अर्कोतर्फ हामीहरु नेपाल र भारतको फरक दररेट सहित नेपालमा सस्तो पाइने वस्तुहरुको फरक दररेट सहित कम्तीमा ५० वटा वस्तुको मुल्य पनि मूल्यसूची वोर्ड राखेर प्रर्दशनी गराउँदैछौँ । यसले गर्दा केही न केही भारत जाने उपभोक्तालाई रोक्न सकिन्छ की भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
प्रत्येक वर्ष मेला महोत्सव हुँदै आएका छन्, तर उद्योग व्यवसायको विस्तार भएको देखिंदैन किन होला ?
महोत्सवले उत्पादनको प्रदर्शनी स्थल प्रदान गर्ने हो । महोत्सवमा प्रदर्शनीमा राखिएका उत्पादनहरु र कसरी उत्पादनमा जान सकिन्छ भन्ने सरकारका निकायहरुले सिकाउने, तालिम दिने हो । हामीले त उत्पादित वस्तुहरुको प्रर्दशन गरी सिधैै उपभोक्तासंग जोड्ने पुलको काम गर्ने हो ।
तर पनि कृषि, पर्यटन र उपभोक्तामा दिनदिनै प्रगाति भएको छ । आज धेरै वस्तु मासुजन्य उत्पादन, अचारजन्य उत्पादन, फुल, माला जन्य उत्पादनहरु यही हुन लागेको र हामी विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढेका छौं । अब सरकारकोतर्फबाट उद्योग वातावरणमैत्री र कानुनको खाँचो परेको छ ।
मेला महोत्सव हाटबजार जस्ता भएका छन् भन्ने गुनासो छ नि ?
महोत्सवहरु कहाँ लगाउने, कसले लगाउने र महोत्सव लगाउँदा के–के मापदण्ड तय गर्ने भन्ने कानून मापदण्ड सरकारले बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकासम्म महोत्सव लगाउन जाने हो भने ती महोत्सवहरु हाटबजार भन्दा पनि अझ कमजोर खालका गुणस्तरहीन हुनेछन् । यस सरकारले रुपन्देही जिल्लामा बढीमा २ वटा र अन्य जिल्लामा १ वटा मात्र लगाउन दिने र त्यसको मापदण्ड यो हुने भनेर कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि महोत्सव प्रदर्शनी स्थलमा परिणत हुनेछन् ।
महोत्सवलाई विगतका महोत्सव भन्दा के के कुरामा फरक बनाउनु भएको छ ?
यो महोत्सव भैरहवामा पाँचौ पटक हामीहरुले गर्दैछौँ । रुपन्देहीका देवदह, तिलोत्तमा गरी अहिलेसम्म ८ वटा राष्ट्रिय तरको महोत्सव आयोजना गरेको हाम्रो अनुभवी युवा टिम छ । त्यो अनुभवलाई अहिलेको महोत्सवमा राम्रो निखार गरी ल्याउने छौँ । गुणस्तरीय सस्तो समान, कृषि पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता, खेल उद्यानमा स्पेस दिदै अवलोकन वालउद्यान, आर्कषक सांस्कृतिक कार्यक्रम सेल्फीजोन, पर्यटकीय स्थानहरुको जानकारी यो महोत्सवमा हुनेछ । केही न केही फरक दर्शकले महसुस गर्नुहुनेछ ।
महोत्सवमा अन्य गतिविधिहरु के हुन्छन ?
महोत्सवभित्र ४ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । उद्योग, कृषि र पर्यटन सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरी कतिपय नीति निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
महोत्सव गर्ने स्थान अर्थात मण्डप छैन । व्यक्तिको जग्गामा कति सम्भव हुन्छ ?
यो मण्डपको कुरा हामीहरु १३ वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौँ । वास्तवमा निजी क्षेत्रले उठाएको कुरा सरकारी क्षेत्रले नसुन्ने भएको छ ।अब हामीहरु यस भैरहवामा प्रर्दशनीस्थल, वस्तुगत प्रर्दशनी, राजनीतिक दलहरुको लागी सभा सम्मेलन गर्ने बहुउपयोगी मण्डप नगरपालिकाको पहलमा हुनुपर्दछ । हामी सबै संघ–संस्थाले माग उठाएका छौं । राजनीतिक दलहरुले नगरपालिकालाई घच्घच्याएर स्थायी मण्डपको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्न चाहन्छु ।
असल समाज निर्माणका लागि आशावादी हुनैपर्छ : वरिष्ठ नेता नेपाल शनिवार, कार्तिक ३०, २०७६, १७:५०:००
एमसीसीको निर्णय नेपालीको हितमा राखेर गर्छौ : प्रवक्ता श्रेष्ठ शनिवार, माघ ४, २०७६, ०९:५८:००
सामाजिक सञ्जाल मार्फत् गरिने विज्ञापनको आधिकारिकता खोजिने आइतवार, श्रावण १२, २०७६, १२:०८:००
भारतको मिचाहा प्रवृत्ति स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य हुँदैनः मीनेन्द्र रिजाल
‘नेपाल कसैको छोटे भाइ होइन’ - महासचिव पौडेल
सीमा विवादबारे उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्छन् - ‘परिआएको सामना गर्न तयार छौंँ’
‘वैंकर्स एशोसियनले चलाएको सिण्डीकेट नतोडेसम्म आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन’
कोरोना विजेता पानादेवी भन्छिन्, - 'हिम्मत गर्नुस्, म बूढी मान्छेले त जितेँ'
'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोरोनासँग सचेत हुँदै लकडाउन हटाउनु पर्छ'